IGiya yeGiya | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Iilebhu ze-GB zibeka umbono ngekamva kwi-HPA
Ikhaya » imisebenzi » IGiya yeGiya
Ukuvulwa koMsebenzi: iGear Guru
Umvuzo / Umlinganiselo
UYobhi wayefakwe kuyo
Umgangatho woLawulo lweGiya yeGear kwiNdlu yokuQeshisa ngeKhamera
Isandi sinomdla? Ndiyavuya ukuyiva-nceda uthathe umzuzwana ukuba uyifunde kakuhle le posi. Kwaye ukuba ucinga ulungile qhubeka kwaye usebenzise.
Sizimele yindlu eqeshisayo yekhamera emi kwicala elingasentshona LA. Siliqela elincinci kodwa elinomdla, sigxile ekuboneleleni ngeekhamera / iilensi / izinto ezincedisayo zakutshanje kubathengi bazo zonke iimvelaphi nohlahlo-lwabiwo mali. Sisebenza nabenzi beefilimu kunye nabasebenzi beekhamera abasebenza kuluhlu olubanzi lweeprojekthi, kwaye kuhlala kukho imiceli mngeni emitsha yokunyuka kunye nezixhobo ezitsha zobugcisa.
Sinokuvulwa kwangoko kwinto endiyihlela njenge- "Gear Guru." Eli lungu leqela liza kuba li-laser egxile kulawulo olusemgangathweni lwazo zonke izixhobo ze-inventri yethu kwaye zigcinwe zilungelelaniswe zaze zagcinwa zikwimigangatho ephezulu.
Ngaba uluhlobo olunomdla onzulu kwiikhamera, iilensi kunye netekhnoloji? Ngaba ufumana uvuyo ngaphandle kwebhokisi yetekhnoloji entsha kunye nokuqonda ukuba isebenza njani? Ngaba ubuchwephesha ubuchwephesha kwaye uyakwazi ukufumana uninzi lweengxaki zobuchwepheshe ngokwakho? Ngaba uyazi ukuba solder? Ngaba uyakuvuyela ukubona ukwakhiwa kwekhamera eyenziwe kakuhle? Ngaba uyazi kakuhle kuzo zonke iikhamera kunye neelensi ezisetyenziswayo kwimveliso yefilimu / yeTV yanamhlanje? Okokugqibela- ngaba uyayithanda indawo enomngeni apho uya kuba nemisebenzi emitsha ephoswa kuwe yonke imihla?
Ukuba kunjalo - kufuneka sithethe.
Izinto ezifunekayo kumava:
Ubuncinci iminyaka emi-2 yamava asetiweyo kwindima efanelekileyo yesebe lekhamera.
• Iminyaka emi-2 yamava esebenza kwindlu eqeshisa ikhamera kwindima ephatha izixhobo
Ulwazi olusebenzayo lwazo zonke iintlobo zekhamera eziphambili (Arri, Red, Sony, Canon, njl)
Ulwazi olusebenzayo lwezinto ezininzi zekhamera zangoku kunye neelensi
• Izakhono ezigqwesileyo zekhompyuter kunye nezombutho
• Amandla okulawula ishedyuli yakho kunye nemisebenzi-yokukhuthaza ngokwakho
• Ubuncinci izalathiso ezi-2 ezigqwesileyo ezivela kwiingcali ezifanelekileyo zeshishini
• Ingcali yeelensi okanye amava okulungisa i-BIG plus! Kodwa akufuneki
• Imfundo yekholeji yeminyaka emi-4 iyakhethwa kodwa isidanga seminyaka emi-2 samkelekile. Isatifikethi sokusebenza okanye obunye ubungqina bemfundo ephakamileyo bunokwamkeleka kwimeko nganye.
Kuqala nini oku?
Singathanda ukuba nomntu olungele ukubetha umhlaba abaleke kwasekuqaleni kukaJanuwari. Silungiselela unyaka omkhulu kwi-2021 kwaye sonwabile ukwandisa iqela lethu kwaye sandise ukufikelela kwethu kunye nemigangatho yenkonzo.
Singazenza udliwanondlebe kamva kule nyanga silandelwe ngodliwanondlebe lomntu emva nje konyaka omtsha. Ukuba sifumana umgqatswa ofanelekileyo sinethemba lokuba uya kuqala phakathi kuJanuwari.
Umvuzo wokhuphiswano lwendawo ye-LA ehambelana namava, inkxaso-mali yeinshurensi yezempilo, iibhonasi zonyaka, umgaqo-nkqubo wesisa we-PTO, kunye namathuba omsebenzi wekhamera osebenza ngokuzimeleyo
Iinyanga zokuqala ezi-3 zengqesho zithathwa njengelithuba loqeqesho lokulinga kumvuzo weyure. Nje ukuba udlulise loo ndawo ibalulekileyo, uphumelele kwisikhundla somqeshwa esiqhelekileyo kunye nazo zonke izibonelelo ezibandakanya.
Nceda uqaphele, ASIKHO sikhangela umntu ofuna nje umsebenzi iinyanga ezi-6 okanye kunjalo, okanye ujonge ukuhambisa izinto kude kube ziqala iigigs. Ndiyayiqonda loo mfuno, kodwa njengeshishini elincinci asinakukwazi ukutyala ixesha ekuziseni ukuba sikhawuleze siphulukane nawe kungekudala kamva - sifuna umntu okulungeleyo ukuhlala okwexesha eliphakathi neliphakathi, ukuba hayi ixesha elide. Enkosi ngokuqonda.
Indlela yokufaka isicelo:
Nceda uthathe umzuzwana kwaye uqiniseke ukuba i-resume yakho yeyangoku kwaye inamava afanelekileyo. Siyakukhuthaza ukuba ubhale ileta emfutshane echazayo echaza izizathu zokuba kutheni ufuna ukusebenza kolu shishino kwaye yintoni eyenza ukuba ube ngumgqatswa owahlukileyo. Kwaye okokugqibela, qiniseka ukubandakanya izingqinisiso ezingabantu ezifanelekileyo kumgangatho wekhamera. / umhlaba wendlu oqeshisayo.
Nje ukuba yonke loo nto uyithumele ngaphaya kwesihloko: iGear Guru Job
Vuselela ngoku leenkcukacha ezithe vetshe
Sele sele ilungu? Ndiyacela sayina
Previous: Umxube womculo
next: Umxube womculo